TeamViewer အတွက်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအကူအညီများအတွက် Emulator.online ▷🥇
TeamViewer သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျယ်ပြန့်ဆုံးအသုံးပြုသောအဝေးထိန်းအကူအညီပေးရေးပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် network အခြေအနေအားလုံး (အထူးသဖြင့်နှေးကွေးသော ADSL ကွန်ယက်များတွင်ပင်ပြevenနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်) နှင့်အဝေးထိန်းဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းကဲ့သို့သောအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့်အလိုအလျောက်အဝေးမှအဆင့်မြှင့်ခြင်း (အသစ်စတင်သုံးစွဲသူများ၏ PC များ၌ပင်ပရိုဂရမ်ကို update လုပ်ရန်အသုံးဝင်သည်) ။ ကံမကောင်းစွာပဲသို့သော် အခမဲ့ TeamViewer ဗားရှင်းတွင်သင့်တွင်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်၊ ၎င်းကိုစီးပွားဖြစ်အခြေအနေတွင်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုစစ်ဆေးသည် (ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုသူများဟုတ်မဟုတ်ကိုစစ်ဆေးရန်) ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူလိုင်စင်ကိုမဖွင့်ဘဲဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့မဟုတ်ဝေးလံသောပရင်တာကိုသက်ဝင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေးလံသောအကူအညီများကိုငွေပေးချေစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအားကူညီလိုပါကဤလမ်းညွှန်တွင်သင့်အားပြပါလိမ့်မည် ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအကူအညီများအတွက် TeamViewer အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထို့ကြောင့်သင်သည်မည်သည့်ကွန်ပျူတာကိုမဆိုအချိန်နှင့်အချိန်အကန့်အသတ်မရှိထိန်းချုပ်နိုင်ပါပြီ။
အဖတ်ကိုလည်း: ကွန်ပျူတာနှင့်အဝေးမှချိတ်ဆက်ရန်အဝေးထိန်း desktop ပရိုဂရမ်များ
ကျွန်ုပ်တို့ပြသမည့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပါအဝငျ: ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာများကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီပေး ယူရိုဆပ်ဖို့မလိုဘဲ။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများတွင် (အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များ) တွင်အကန့်အသတ်များရှိသော်လည်းထောက်ပံ့မှုကိုတားဆီးနိုင်သောအရာမရှိပါ။ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြသောဝန်ဆောင်မှုများကိုသာပြသပါမည် TeamViewer အဖြစ် configure လုပ်ရန်ရိုးရှင်းပါသည် အတွေ့အကြုံနည်းသောသုံးစွဲသူများအတွက် (ဤအမြင်မှ TeamViewer သည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်) ။
သင်ယခုအသုံးပြုနိုင်သောအကောင်းဆုံး TeamViewer ရွေးချယ်စရာမှာဖြစ်သည် ခရုမ်းဝေးလံခေါင်သီ desktopPC များအားလုံးတွင်ဂူဂဲလ်ခရုမ်းကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် server အစိတ်အပိုင်း (ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် PC တွင်) နှင့် client အပိုင်း (ကျွန်ုပ်တို့အကူအညီကိုပေးမည်ဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင်) ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Browser add-on ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Chrome Remote Desktop ဖြင့်ဝေးကွာသောအကူအညီကိုမြန်ဆန်စွာပြုပြင်နိုင်သည် (ဆာဗာဆိုဒ်ကိုဖွင့ ်၍ စာနယ်ဇင်းကိုနှိပ်ပါ) pc ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ) ဤအဖွဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်ထားသောထူးခြားသောကုဒ်ကိုကူးယူခြင်းနှင့်ကုဒ်အတွင်းထည့်သွင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ရှိသုံးစွဲသူစာမျက်နှာသို့ခေါ်ဆောင်ခြင်း။ တပ်ဆင်မှုအပြီးတွင်အကူအညီနှင့်လျှင်မြန်စွာနှင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက် desktop ကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ PC အစိတ်အပိုင်းများစွာတွင် server component ကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးပြသနာများမရှိသောကွန်ပျူတာ (၂) ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်မကကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကွဲပြားသောအမည်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ support စာမျက်နှာသို့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ လမ်းညွှန်တွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Chrome Remote Desktop ကိုလည်းစမတ်ဖုန်းမှအသုံးပြုနိုင်သည် ဆဲလ်ဖုန်းဖြင့် Chrome Remote Desktop (Android နှင့် iPhone).
Iperius ဝေးလံသော desktop
ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအကူအညီများအတွက်နောက်ထပ်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်သူသည် Iperius ဝေးလံသော desktopတရားဝင် download စာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ခုတည်းသော software အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤပရိုဂရမ်သည်ခရီးဆောင်ပင်ဖြစ်ပြီး၊ ဆာဗာနှင့်သုံးစွဲသူ၏မျက်နှာပြင်ကိုချက်ချင်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်အတွက် executable ကိုဖွင့်ပါ။ ဝေးလံခေါင်သီသောဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်၊ ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပရိုဂရမ်ကိုစတင်ထိန်းချုပ်ရန်၊ အမည်တူ၏ကွက်လပ်တွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစကားဝှက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ၊ ထိပ်ဘက်ရှိဂဏန်းကုဒ်များကိုကော်ပီကူး။ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ Iperius Remote Desktop တွင်ထည့်ပါ။ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ချိတ်ဆက်ရန် ID; ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Connect ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး desktop ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်နှင့်လိုအပ်သောအကူအညီများပေးရန်စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်သည်။ ပရိုဂရမ်ကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော ID များကိုအလွတ်ကျက်စေသည်။ ပိုင်ခွင့်မရှိသောဝင်ရောက်ခွင့်ရွေးစရာများကိုကြိုတင်ခွင့်ပြုထားသည် (Access password ကိုရွေးချယ်ခြင်း) ။ ဤနည်းဖြင့်အလိုအလျောက်အစီအစဉ်ကိုချက်ချင်းအကူအညီပေးရန်လုံလောက်သည်။
Windows 10 ပါ ၀ င်သည့် PC ရှိပါကထိုအသုံးချမှုကိုအသုံးချနိုင်သည် အမြန်အကူအညီဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ Start menu တွင်ရနိုင်သည်။
ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လျှောက်လွှာကိုဖွင့ ်၍ အခြားသူတစ် ဦး ကိုကူညီပါ၊ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အကောင့်ဖြင့်ဝင်ပါ (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုမရှိလျှင်အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည်) နှင့် carrier ကုဒ်ကိုမှတ်ထားပါ မ။ ယခုတက်ရောက်ရန်တက်ရောက်သူများ၏ကွန်ပျူတာသို့သွားပါ၊ Quick Assistance app ကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စားပွဲခုံကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးမည်သည့်အကူအညီကိုမဆိုအချိန်အကန့်အသတ်မရှိပေးနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် RDP အမြန်နှုန်းကို TeamViewer ၏အဆင်ပြေမှုနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး၎င်းကိုဖြစ်စေသည် Navigaweb.net မှအကြံပြုတဲ့ကိရိယာ.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်ကွဲပြားသောလည်ပတ်ရေးစနစ်များရှိသောကွန်ပျူတာများစွာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အလောင်းအစားလုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောလုံးဝလွတ်လပ်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုမှာ DWServiceတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတိုက်ရိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအနည်းဆုံးအကူအညီပေးသူများအတွက်ဘရောင်ဇာမှတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆက်လက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေါင်းလုပ်ရယူသည် DWAgent ကူညီရန်ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများ) ပေါ်တွင် PC နှင့်အတူစတင်ပါ၊ ဆက်သွယ်မှုအတွက်လိုအပ်သော ID နှင့်စကားဝှက်ကိုမှတ်သားပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့သွားပါ၊ သင်မြင်တွေ့ရသော site ပေါ်တွင်အခမဲ့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးကွန်ပြူတာအား ID နှင့် password ဖြင့်ထည့်ပါ။ ယခု အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့် browser ကိုမဆိုဖွင့ ်၍ အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်အကူအညီကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်။ ဆာဗာကို Windows၊ Mac နှင့် Linux များတွင်တပ်ဆင်နိုင်သည် DWService သည်ကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာအများအပြားနှင့်အတူသူတို့အဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုကိုရိုးရှင်းသောအဝေးထိန်းအကူအညီပေးလိုပါက၎င်းသည်သူပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည် UltraViewerတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှရယူနိုင်သည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည် TeamViewer lite ဗားရှင်းအကြောင်းမှာ၎င်းတွင်အလွန်ဆင်တူသော interface နှင့်လက်တွေ့အားဖြင့်တူညီသော connection method ရှိသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်စတင်ပါ၊ ID နှင့်စကားဝှက်ကိုကူးယူပါ၊ လက်ထောက်ကွန်ပျူတာရှိပရိုဂရမ်မျက်နှာပြင်တွင်ထည့်ပါ၊ ကွန်ပျူတာကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ၀ င်းဒိုးကိုကြော်ငြာစရာမလိုပဲသို့မဟုတ် Pro ဗားရှင်းသို့ပြောင်းရန်ဖိတ်ကြားချက်များ (အားလုံးသိသော TeamViewer ကန့်သတ်ချက်များ) ။
TeamViewer အတွက်အခြားနည်းလမ်းများမရှိသလောက်နည်းပါးသည်။ ဤဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အားအသုံးပြုသူအသစ်များအတွက်တောင်သုံးစွဲရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်မှာအလွန်လွယ်ကူသည် (အမှန်မှာသင်၏ဝေးလံခေါင်ဖျား assistant သို့သင်၏ ID နှင့်စကားဝှက်ကိုသာဆက်လက်ဆက်သွယ်ပါ) ။ ကျွန်ုပ်တို့ပြသသော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည် (UltraViewer မှလွဲ၍ ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်)၊ ၎င်းသည်စျေးကြီးသော TeamViewer စီးပွားရေးလိုင်စင်အတွက်ခိုင်လုံသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။
ဝေးလံခေါင်သီသောအကူအညီအစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည် အဝေးမှအလုပ်လုပ်ရန်အဝေးမှ PC ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ mi အင်တာနက်ကိုအဝေးမှကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ.
တကယ်လို့ Mac အစား MacBook ကိုအဝေးကနေထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်နိုင်ပါတယ် Mac မျက်နှာပြင်ကိုအဝေးကနေဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ.
၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာမှာဝက်ဘ်ကင်မရာဆက်တင်များ (ဆန့်ကျင်မှုနှင့်တောက်ပမှု) ကိုဘယ်လိုချိန်ညှိရမလဲ
သင်ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုရသောအခါ Zoom ကိုမည်သို့ထည့်ရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့လှုံ့ဆော်ပေးသော 3D avatar နှင့်ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်၌ပေါ်လာမည်
သင့်ရဲ့ PC မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစည်းမျဉ်းကိုထည့်ပါ
MKV ကို AVI သို့ပြောင်းပါသို့မဟုတ် MKV ကို DVD သို့ကူးပါ
မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံများနှင့် ၃၆၀ ဒီဂရီပုံရိပ်များကိုအွန်လိုင်းနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖန်တီးပါ
ပီစီတွင်ဂီတကိုအခမဲ့ DJ အစီအစဉ်များနှင့်ရောနှောပါ
သင်၏ PC desktop ကိုအသက်ဝင်စေပါ။ ဓာတ်ပုံ collages များ၊ 3D screensavers များနှင့်ဝစ်ဂျက်များဖြင့် wallpaper
Virtual 3D အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခမဲ့ download လုပ်နိုင်သည်
ဇယားဆွဲခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်းအတွက် Visio အခြားနည်းလမ်းများ